गृह र प्रशासन बालुवाटारको नियन्त्रणमा,पर्सा हत्याकाण्ड ओलीकाे मुठ्ठिमा! – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated Oct 29, 2020 64 0
१३ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपाको शीर्ष तहको कलहमा पर्सा हत्याकाण्डसमेत थपिएको छ । मारिएका स्थानीय विन्दवासिनी गाउँपालिका कमिटी सचिव मुकेश चौरसिया पूर्वएमाओवादी निकट हुन् ।
पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुनुभएता पनि, गृह मन्त्रालयको पूर्ण कमाण्ड बालुवाटारको हातमा छ । जाहेरी दर्ता गर्दा पूर्व एमालेमा गुटका हस्तीबिरुद्ध कदम चालिएको अर्थ लाग्ने भएकाले मुद्दा दर्ता हुन नसकेको पूर्व एमाओवादीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
अहिले पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेकै माधव नेपाल खेमा जति सबै उक्त हत्याको न्यायिक निरूपणको लागि प्रहरीले परिवारले दिएकै जाहेरी दर्ता गर्नुपर्नेमा अडिगमा छन् ।
तर,पूर्व एमाले निकटमध्ये पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट अधिकांश केन्द्रीय,प्रादेशिक र जिल्लास्तरीय नेता तथा कार्यकर्ता खास खास ब्यक्तिको नाम सम्लग्न जाहेरी दर्ता गर्नै नहुने अडानमा रहेको कारण छ। केहि दिन देखि लाश उठ्न सकेको छैन ।
गत बिहीबार गाउँ कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुँदै गर्दा दुई पक्षबीच भएको भिडन्त सांघातिक आक्रमणमा परिणत भएको थियो । उपचारार्थ अस्पताल लगेपनि चौरसियाको त्यहिँ निधन भयो । दुबै थरिले उनको हत्या भएको विषयलाई भने स्वीकारेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा पोष्ट गरिएका कतिपय भिडियोमा समेत स्पष्टसँग प्रहार गरेर मारिएको देखिन्छ ।
यता,गृहमन्त्री पनि पूर्व एमाओवादीकै नेता हुन् । तर,यतिखेर उनि प्रधानमन्त्रीका थोरै विश्वासपात्र मध्ये एक बनेकाले उक्त हत्याको जाहेरी दर्तामा सुनियोजित अवरोध पुर्याइएको पर्सा र तराईका अधिकांश पूर्व एमाओवादी नेताहरूको बुझाई छ ।
प्रशासनमा बालुवाटारको नियन्त्रण र नेकपाभित्र उत्पन्न कलहमा पर्साको पछिल्लो घटनाले मलजल पुर्याउनसक्ने बताइन्छ ।
जाहेरी दर्ता नगर्न सरकारले दबाब दिएको सन्दर्भ चुलिँदा उता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जोसुकै दोषी भएपनि कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गर्नुभएको छ ।
पर्साको पछिल्लो घटनाले उता मातृका यादवहरूलाई पनि क्षुब्ध बनाएको छ । यादवलगायत तीन दर्जन केन्द्रीय समिति सदस्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चौरसियाको मृत्युलाई ‘सुनियोजित आक्रमणको घटना’ भनिएको छ ।